Xinhua Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများကို အဖြေရှာရာတွင် သင့်လျော်ကိုက်ညီသော ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ် ဖန်တီးရန် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကို တရုတ်နိုင်ငံ တိုက်တွန်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများကို အဖြေရှာရာတွင် သင့်လျော်ကိုက်ညီသော ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ် ဖန်တီးရန် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကို တရုတ်နိုင်ငံ တိုက်တွန်း
တရုတ်နိုင်ငံ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံရေး
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြို့တော်ခန်းမအနီး လမ်းဖြတ်ကူးနေသူများကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) Politics, Law & Military
ပေကျင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
တရုတ်နိုင်ငံက နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအား မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ အဖြေရှာရန် သင့်လျော်ကိုက်ညီသော ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ် ဖန်တီးသင့်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်တွင် တိုက်တွန်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဝမ်းဝန်ပင်းက မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထောက်၏ မေးမြန်းမှုအပေါ်ဖြေကြားရာတွင် အထက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်က ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဆက်စပ်သော ဆွေးနွေးမှုများ၌ အပြုသဘောဆောင်စွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အခြေအနေများကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ အဖြေရှာရေးအတွက် သင့်လျော်ကိုက်ညီသော ပြင်ပ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ် ဖန်တီးသင့်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးကောင်စီက ပြုမူဆောင်ရွက်ချက် အားလုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းတည်ငြိမ်ရေး ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ တင်းမာမှုပိုမိုမြင့်တက်ခြင်းနဲ့ နောက်ထပ် အခြေအနေများ ပိုမိုရှုပ်ထွေးအောင် ပြုလုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားရေးသာ ဖြစ်သင့်ကြောင်း” ဝမ်းက ပြောခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံက ထောက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်း ရှိနိုင်မည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်များအားလုံးနှင့် ထိုသို့သော စွပ်စွဲချက်များမှာ မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း ဝမ်းက ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဝမ်းဝန်ပင်းက “သက်ဆိုင်ရာ ပြောဆိုမှုတွေက မှန်ကန်မှုမရှိပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ သက်ဆိုင်ရာ ဘက်ပေါင်းစုံက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ဥပဒေမူဘောင်အတွင်းက ကွဲလွဲမှုတွေကို ကောင်းမွန်သင့်လျော်စွာ ဖြေရှင်းဖို့၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ကြဖို့ မျှော်လင့်တယ် ”ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
China calls on international community to create sound external environment for Myanmar to solve differences
BEIJING, Feb.3(Xinhua) -- A Chinese Foreign Ministry spokesperson said on Wednesday that the international community should createasound external environment for Myanmar to properly resolve the differences.
Spokesperson Wang Wenbin made the remarks atadaily news briefing when answeringaquestion on the situation in Myanmar.
He said that the United Nations Security Council on Tuesday held internal consultations on the situation in Myanmar, and China participated constructively in relevant discussions.
"The international community should createasound external environment for Myanmar to properly resolve the differences," Wang said. "All actions taken by the Security Council should be conducive to Myanmar's political and social stability, peaceful reconciliation and avoid exacerbating tensions and further complicating the situation."
Wang refuted allegations that the political change in Myanmar may have taken place with China's support or acquiescence. He said such allegations are untrue.
"Asafriendly neighbor of Myanmar, China hopes that all parties in Myanmar will properly handle their differences under the constitutional and legal framework, and maintain political and social stability." Enditem
Pedestrians crossaroad next to the city hall of Yangon, Myanmar, Feb. 3, 2021. (Xinhua/Zhang Dongqiang)